Noforonina tany amin’ny 1899 ary novokarina sy natobaka teo amin’ny tsena 50 taona taty aoriana, ny bateria NiCd no isan’ny bateria voalohany namaly ny filàna angovonaratra azo fahanana sy averina ampiasaina, ary nosokajiana hoa “fanampiny” (raha “fototra” ny sokajin’ilay vatoaratra tsy azo fahanana).
Azo atao hoe nolovaina tamin’ny vatoaratra mampiasa tsora alkalina ny akora ampiasaina amin’ny elektrôlita. Ny elektrôda roa kosa dia namboarina mba hahazaka fiota azo avadika ka ny fikorian’ny aratra mandroso na miverina eo amin’ny eletrôda roa no mamaritra ny fahana na ny fandaniam-pahana.
Ny bateria “fanampiny” dia tsy afa-misaraka amin’ny rafitra elektrônika natao ho mpamahana ny bateria, ary ny toetry ny bateria NiCd rehefa fahanana dia nahafahana nampivelatra karazana teknika famahanana sy fitiliana fahana ary fiarovana ny bateria azo fahanana.
Nikela Kadmiôma (NiCd)
Araka ny anarany dia miaty singa simika Nikela (Ni) sy Kadmiôma (Cd) amin’ny endrika sy fangaro samihafa ny bateria NiCd. Matetika ny elektrôda miabo dia vita amin’ny hidrôksidana nikela ary ny elektrôda miiba kosa dia amin’ny hidrôksidana kadmiôma. Ny elektrôlita kosa dia mampiasa hidrôksidana pôtasiôma.
Mampiavaka ny bateria NiCd ny rianaratra 1.2V omeny, raha 1.5V izany ho an’ny alkalina, ary tsy milatsaka firy io haabo io mandritra ny fotoana fandaniam-pahana.
Amin’ny ankapobeny dia misy fiota elektrô-simika telo mitranga eo amin’ny vatoaratra azo fahanana sy ny bateria:
ny fiota amin’ny fandaniam-pahana rehefa ampiasaina (na tsia);
ny fiota amin’ny famahanana rehefa hameno herinaratra vaovao
ny fiota rehefa mihoatra ny famahanana
Mpihazaka telo no mamaritra ny fahombiazana eo amin’ny famahanana ny NiCd (sy ny bateria azo fahanana amin’ny ankapobeny): ny sandam-pahana, ny fotoana faharetany fahana, ary ny mari-pana. Ny mpamahana bateria dia mandrafitra ny elektronika ao aminy araka ireo mpihazaka ireo.
Anisan’ny toetra mampiavaka ny NiCd ny fomba teknika famahanana azy satria mila vaikanaratra marin-tombina sy raikitra, ary tsy mahazaka fiovaovana be amin’ny rianaratra. Io vaikanaratra raikitra io dia sandaina ho ampahan’ny tahiry fahan’ilay bateria (mAh) ary refesina amin’ny isan-jato. Araka ny fatran’io isan-jato io ny sanda omena ny fahana sy ny faharetany fotoana famahanana.
Io sandam-pahana io no iankinan’ny karazan’ny fomba teknika ampiasain’ny fitaovana mpamahana amin'ny ankapobeny ka ireto ny fampiasa indrindra:
Fahana “tontolo alina” (overnight charge)
faharetan’ny fahana: 15 ora
fatran’ny fahana: tsy voaraka, mety ho latsaka mety ho mihoatra
VB: rianaratry ny bateria
Ich: vaikanaratra mpamahana
h: faharetan'ny famahanana
Famahanana tsotra sy ekônômika indrindra ary fampiasa amin’ny fitaovana tsy lafo vidy, tsotra sy tsy be pitsiny. Vaikanaratra 100mA marin-tombina sy rianaratra 1.45V eo ho eo no ampiasaina. Mijanona ny famahanana rehefa afaka 15 ora.
Ny olana lehibe amin’ity fomba ity dia izy tsy voaraka ny fetran’ny fahana rehefa mifahana ela loatra. Raha bateria manana tahiry fahana 100mAh ohatra no fahanana amin’ny sandany 0.1CmA mandritra ny 15 ora dia mifahana 150mAh (150%). Ny ankamaroan’ny bateria NiCd anefa dia tsy mahazaka mihoatra ny 120% n’ny tahiry fahany, ary manafohy ny fahatezany rehefa miverimberina (jereo ny “Fahana mihoatra”). Mety tsy ho ampy fahana indray anefa raha fohy loatra ny faharetan’ny famahanana ka mety tsy ho feno ny tahiry fahana ary miteraka olana atao hoe “ariky ny bateria” (jereo "Ariky ny bateria")
Fahana “faharetana voaraka” (timer controlled)
faharetan’ny fahana: 6-8 ora
sandam-pahana mitsitapitapy: 0.05 - 0.033CmA
fatran’ny fahana: 120%
Famahanana tsy dia sarotra sy tsy lafo ihany koa ary fampiasa amin’ny fitaovana tsy lafo vidy, tsotra sy tsy be pitsiny.
Ity fomba famahanana ity dia mifototra amin’ny fanarahana ny faharetan’ny fotoana famahanana. Mandeha mandritra ny 6 -8 ora amin’ny sanda 0.2CmA ny famahanana ary mijanona ho azy rehefa tapitra io fotoana io. Fahana “mitsitapitapy” avy eo no manohy amin’ny sanda 0.05CmA.
Ny fahavalon'ity fomba ity dia ny fahatapahan’ny herinaratra eo am-pamahanana (delestazy ohatra) satria miverina manomboka hatrany amin’ny voalohany ilay fandrefesam-potoana. Ny olana hafa koa dia mety ho voan’ny olana “ariky ny bateria” raha ela loatra ilay fahatapahana na koa tratran’ny olana “fahana mihoatra” raha miverimberina ny fahatapahana.
Fahana “delta hafanana” na "ΔT" na “dT/dt” (ΔT cut-off)
sandam-pahana: 0.5 – 1.0CmA
faharetan’ny fahana: 1-2 ora
fatran’ny fahana: 100 - 110%
Famahanana somary be filirony sy misimisy vidy ihany koa ary fampiasa amin’ny fitaovana avo lenta sy lafo vidy.
Ity famahanana ity dia mifototra amin’ny fandrefesana ny hafanan’ny bateria fahanana. Ety amin’ny fonony no refesina ny hafanana kanefa mafana lavitra ny ao anatiny. Ny ankamaroan’ny mpanamboatra, indrindra ireo mora vidy, dia mametraka ny mari-pàna 50°C ho fetra famantarana fa feno ny fahana ary mijanona ho azy ny famahanana. Tsy dia olana loatra io fihoarana ny 45°C io raha haingana ny filatsaky ny mari-pana rehefa vita ny famahanana. Ireo avo lenta kosa dia tsy miandry fotsiny an’ilay mari-pana fetra fa mitily ihany koa ny fisondrotry ny hafanana mandritra ny fotoana famahanana. Araka ny toetran’ny NiCd dia mihafaingana ny fisondrotry ny mari-pana rehefa akaiky ho feno fahana, ary lazaina fa feno rehefa mahatratra 1°C isaky ny 1mn ny fisondrotry ny mari-pana. Rehefa tratra io fisondrotra io dia feno izay ny fahana ary mijanona hoa azy ny famahanana. Fahana “mitsitapitapy” avy eo no manohy amin’ny sanda 0.05CmA.
Mety amin’ny bateria namboarina ahazaka fahana haingana ihany ity fomba famahanana ity.
Ny olana lehibe amin’ity famahanana ity dia izy tsy mijery izay fatran’ny fahana ao amin’ny bateria ho fahanana, ka raha bateria feno fahana no apetraka sy tsoahina matetika dia “hafanainy” mandram-pahatongan’ilay fetra ka mety ho simba noho ny “fahana mihoatra”.
Fahana “miiba delta vôlta” na “–ΔV” (ΔV cut-off)
fatran’ny fahana: 110-120%
Famahanana somary be filirony nefa taka-bidy ihany koa ary fampiasa amin’ny fitaovana avo lenta sy lafo vidy. Famahanana be mpampiasa indrindra noho ny lafitsara maro miohatra amin’ny fomba hafa.
Ity famahanana ity dia mifototra amin’ny fitiliana ny rianaratra voarain’ny bateria fahanana. Rehefa fahanana amin’ny vaikanaratra marin-tombina tsara ny bateria NiCd dia miakatra ny rianaratra voarainy arakaraka ny fandrosoan’ny fotoana famahanana. Mahazo tendrony io fiakaran’ny rianaratra io rehefa feno ny fahana ary manomboka milatsaka avy eo. Io fidinan’ny rianaratra io no tilian’ity fomba famahanana ity ka rehefa mahatratra 15mV - 20mV io filatsahana io (antsoina hoe “–ΔV”) dia azo antoka fa efa feno izany ny fahana. Mijanona hatreo ny famahanana ary fahana “mitsitapitapy” avy eo no manohy amin’ny sandam-pahana 0.05CmA.
Bateria namboarina ahazaka fahana haingana ihany no mety amin’ity fomba famahanana ity satria sarotra ny mitily ilay filatsahan’ny rianaratra amin’ny fahana miadana. Mety ho voan’ny olana “fahana mihoatra” raha bateria natao ho an’ny fahana miadana no fahanana amin’ity fomba ity satria mety ho ela ny fitiliana ilay filatsahan’ny rianaratra. Mila vaikanaratra marin-tombina tsara koa satria mety ho voatily ny fihenan’ny rianaratra vokatry ny fiovaovan’ny vaikan’aratra ka “heverin’ny” mpamahana ho toy ny an’ny fahana feno.
Ny fitaovana avo lenta toy ny finday sy laptôpy matetika dia mampiaraka ity fomba famahanana ity amin’ny fahana “delta hafanana” sy ny fahana “faharetana voaraka”.
Fahana “mitsitapitapy” (trickle charge)
sandam-pahana: 0.05 - 0.33CmA raha matetika ary 0.033 - 0.02CmA raha mahalana
faharetan’ny fahana: 30 ora no mihoatra
Mihena an-toerana ny fahan’ny NiCd rehefa tsy ampiasaina ary eo amin’ny 10% ka hatramin’ny 50% ny fihenany ao anatin’ny 6 volana, arakaraka ny tontolo manodidina ipetrahany indrindra ny mari-pana. Ny fahana “mitsitapitapy” amin’ny sanda fahana malefaka dia natao hamenoana ny tahiry fahana very vokatry ny fandaniam-pahana noho ny tsy fampiasana.
Ity fomba famahanana ity dia hita amin’ny fitaovana izay mampiasa bateria fiandry raha tapaka ny herinaratra ampiasan’ilay fitaovana.
Azo tehirizina amam-bolana amin’ny toerana maina sy mari-pàna −20 °C ka hatramin’ny 45 °C ny bateria NiCd. Ahena hatrany amin’ny 40% ny fahana alohan’ny hitehirizana azy, TSY AZO afohy-safelika (short circuit) kosa anefa fa mahatonga hay miteraka entona hidrôzena izay mety mipoaka sy mirehitra koa aza. Mila fahanana sy ampiasaina tsindraindray anefa ary tsy avela ho ritra tanteraka ela loatra mba tsy hisy kristaly mampita aratra hiforona “mampifandray” ny tendrony ka hamono tanteraka ilay bateria.
Ny ankamaroan’ny fitaovana elektrônika dia natao hiasa hatramin’ny tokonana faharitràna 0.9V na 0.8V, noho izany ilay 1.2V omen’ny NiCd dia ampy ampiasana azy amin’ireny fitaovana ireny, na dia misy ihany aza tranga manokana. Ny NiCd bika 9V ohatra dia avy amin’ny sela 6 na 7 nakambana ka manome rianaratra 7.2V sy 8.4V. Mahazaka tsara ny fitaovana mila 9V ireo saingy tsy mitovy ny faharetany ary samihafa koa ny vidiny.
Saika azo ampiasana ny NiCd avokoa ny fitaovana azo ampiasana alkaline sy mila herinaratra antoniny, indrindra ireo fitaovana enti-manaraka ny tena toy ny laptôpy sy finday, fitaovana mila fahana fiandry toy ny telefaonina mpamaly, jiro fiandry, na koa fanairana.
Rehefa tsy voalaza mazava ny karazana bateria amin'ny fitaovana mavesatra toy ny mpandavaka sy mpitroka vovoka dia mazàna bateria NiCd izay no ao anatiny ka mila fantarina ny faharetan'ny fotoana famahanana azy.
faritra ao amin’ny atidoha itobian’ny fahalalana rehetra sy ny fitadidiana (Akademia Malagasy, 2005, p131)
Atao hoe sandam-pahana ny fatran'ny vaikanaratra ampiasaina rehefa mamahana bateria. Io sanda io dia taha amin'ny tahiry fahana: ampahany amin'ny isan-jato raha latsaka ary mampitombo kosa raha mihoatra. Miankina amin'io sanda io no ametrahana ny fotoana faharetan'ny famahanana.
Ohatra, ny bateria manana tahiry fahana 1000mAh dia azo fahanana amin’ny sandany 10% (0.1CmA) mandritra ny 10 ora, izany hoe fahanana 100mA mandritra ny 10 ora izay mitambatra ho 1000mAh. Raha fahanana amin'ny 1.0CmA (100%) kosa, dia 1 ora ihany ny faharetany. Dia toy izany hatrany ny 2.0CmA, 3.0CmA sns.
Fahana mihoatra (overcharge)
Na inona fomba famahana na inona dia mihoatra ny fetra foana ny fahana, ary efa niomana tamin’izany ny mpanamboatra bateria NiCd
Rehefa fahanana ny bateria NiCd dia mihamafana ary miteraka entona ôksizena sy hidrôzena sy mampiakatra ny tsindry ao anatin’ilay bateria. Voafehy ao anatin’ny fonon’ny bateria anefa ireo entona ireo ary miverina ho hamandoana ampiasain’ilay bateria amin’ny fiota mandritra ny fandaniam-pahana sy fahana.
Raha ela loatra anefa ilay famahanana ka mihoatra ny fetra ny fahana, dia mitombo koa ny hafanana, ny entona ary indrindra ny tsindry ao anatin’ilay bateria. Raha tsy voafehin’ny fonon’ilay bateria intsony ny entona dia mihanaka ety ivelany ireo entona ôksizena sy hidrôzena izay tsy voahodina ho hamandoana ao anaty bateria intsony.
Vokany mihamaina ny atin’ilay bateria ary tsy ampy hamandoana ny fiota amin’ny fahana sy ny fandaniam-pahana. Mihena araka izany ny tahiry fahana ary mihena koa ny tanjaky ny bateria sy ny fahatezany.
Ariky ny bateria (memory effect)
Isan’ny mampiavaka, ary lesoka lehibe amin’ny bateria NiCd ny fananany arika. Io lesoka io dia miseho amin’ny fihenan’ny fahafahan’ny bateria mitahiry fahana vokatry ny fandaniam-pahana sy fahana tsy feno miverimberina.
Lazaina fa manana arika mitadidy hoe fetra taiza no nanomboka ny fahana ary fetra taiza no nijanona, ary ny elanelan’izy roa ireo no “tadidin’ny” bateria fa tahiry fahana feno. Vokany, mihena ny herin’ny bateria ary tsy maharitra ny fiasany. Ho fisorohana io olana io dia ahena araka izay tratra ny fahana alohan’ny amahanana azy ary avela ho feno tanteraka kosa rehefa fahanana.
Mpamahana mampiasa "faharetana voaraka"
Famahana mety amin'ny NiCd manana tahiry fahana 1000mAh amin'ny sandam-pahana 0.2CmA mandritra ny 6 ora (famahanana miadana NiMH koa).
Ny fahatapahan’ny herinaratra mpamahana no fahavalon’ny bateria NiCd voalohany ka mila fantarina mialoha ny faharetan’ny famahanana ary manokana fotoana mba tsy ho voaelingelina ka ho tapaka ny famahanana mandram-pahafenon’ny fahana. Raha fantatra mialoha ny delestazy dia tsara raha vita mialoha ny famahanana na atao any aoriana;
Tsy ny bateria NiCd rehetra dia azo fahanana amin’ny fitaovana mpamahana rehetra. Ny tsara indrindra dia ilay mpamahana niaraka tamin’ilay bateria no amahanana azy. Sahia sarotiny araka izany raha misy mindrana ny mpamahana;
Raha voatery tsy maintsy hampiasa mpamahana hafa dia izay mitovy amin’ilay voalohany ihany ampiasaina, ary raha tsy mahita dia fantaro tsara aloha ilay mpamahana vaovao raha mifanaraka amin’ny toetran’ilay bateria;
Toy izany koa ny bateria, izay mitovy tamin’ilay voalohany ihany atao solony. Raha tsy mahita dia araho izay lazain’ny manamboatra ny fitaovana na fantaro tsara aloha ilay bateria vaovao raha mifanaraka amin’ilay fitaovana sy mpamahana;
Tsara raha esorina amin’ny loharanon'aratra ny mpamahana rehefa feno ny fahana (ary esorina amin’ny mpamahana ny bateria raha afaka miala). Azo avela kosa anefa raha azo antoka fa mijanona ho azy ny mpamahana na manao fahana mitsitapitapy.
Aza fahanana miaraka ny bateria tsy mitovy tahiry fahana fa ho mora tratran’ny olana “fahana mihoatra” ilay kely tahiry fahana;
Pejy teo aloha: Vatoaratra fototra << | >> Pejy manaraka: Bateria NiMH